Apple ကနောက်ဆုံးပေါ် MacOS 10.14.6 Mojave ကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
Apple ကနောက်ဆုံးပေါ် macOS 10.14.6 Mojave ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Javier Porcar | | MacOS US မှာရှိတဲ့ Mojave
Apple မှယောက်ျားများသည် MacOS Mojave ကိုပိတ်ပြီး MacOS Catalina betas ကိုအာရုံစိုက်ချင်ကြသည်။ မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင် Apple က၎င်းကိုဖြန့်ချိခဲ့သည် နောက်ဆုံးပေါ် MacOS Mojave ဗားရှင်းဖြစ်လိမ့်မည်, beta 10.14.6 ပြီးနောက်တစ်ပါတ်ပဲ, version ကို5။
အက်ပဲလ်ဟာဒီဗားရှင်းကိုအမြန်ဆုံးမောင်းနှင်မှာဖြစ်တယ်၊ အကြောင်းပြချက်အချို့ကြောင့် ၃၂ bits ဖြင့်လည်ပတ်နေသော application များအနေဖြင့် Catalina သို့ update လုပ်ရန်အချိန်ယူရသူများသည်ဤဗားရှင်းကိုတတ်နိုင်သမျှအရည်ပျော်စေလိုကြသည်။ ကြွင်းသောအရာများအတွက်, ဒီဗားရှင်းဆောင်တတ်၏ လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်မှုများနှင့်ပုံမှန် bug ပြင်ဆင်မှုများအောက်ပါတို့အပါအ ၀ င်
အသစ်ပြောင်းခြင်းကိုလက်ဖြင့် download လုပ်ရန်သင်သွားရပါမည် စနစ် ဦး စားပေးများ၊ အပိုင်း ဆော့ဝဲလ်ဗားရှင်းမြှင့်တင်မှု။ ဆာဗာများပြည့်နှက်နေခြင်းကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက် Apple သည် updates များကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိပုံစံများဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၎င်းကိုသင်မရရှိနိုင်ပါကမိနစ်အနည်းငယ်စောင့်ပါ။ ကျနော်တို့၏လွှတ်ပေးရန်မှတ်စုများကိုဖတ်လျှင် MacOS 10.14.6 Mojaveအောက်ပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိသည်။
တစ် ဦး ၏ဖန်တီးမှုတားဆီးတဲ့ပြissueနာကိုဖြေရှင်း အသစ်က boot စခန်း partition ကို Fusion Drive ပါသော iMac သို့မဟုတ် Mac mini တွင်။
i ကိုဖြစ်ပေါ်စေသောပြissueနာကိုဖြေရှင်းသည်system ကို reboot နေစဉ်အတွင်းကြားဖြတ်.
ဖြေရှင်းပါ ဂရပ်ဖစ်ပြproblemနာ ကြွင်းသောအရာ၏ပြည်နယ်ထွက်ခွာသည့်အခါဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ဖြစ်ရတဲ့ပြissueနာကိုဖြေရှင်းသည် မျက်နှာပြင်အနက်ရောင်ဖြစ်ခဲ့သည် Mac mini တွင်မျက်နှာပြင်အပြည့်ဖွင့်သည့်အခါ။
၏ယုံကြည်စိတ်ချရပိုကောင်းစေတယ် SMB ကို သုံး၍ ဖိုင်များကိုမျှဝေပါ.
ဤအက်ပလီကေးရှင်းဖြင့်အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုပြည့်မီစေသည် - တည်ငြိမ်ဆုံးလည်ပတ်မှုစနစ်တစ်ခုဖြစ်ရန်။ အသစ်ပြောင်းခြင်းတွင် 2,5 GB GB ပျမ်းမျှအရွယ်အစား။ သင့်ကိုအကြံဥာဏ်ပေးပါ ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမီ backup လုပ်ထားပါမည်သည့်သက်ဆိုင်ရာ update ကိုလိုပဲ။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ၊ နောက်ဆုံးပေါ် MacOS Mojave ဗားရှင်းဖြစ်သောကြောင့်သုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုထည့်သွင်းရန်ပိုနှစ်သက်ကြသည် combo, အပြည့်အဝဗားရှင်းဖြစ်သော။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ Combo ၏တပ်ဆင်မှုနှင့်အတူမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ဖြင့်မဆိုယခင်မွမ်းမံမှုများတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိသောမည်သည့်ဖိုင်ကိုမဆိုမှန်ကန်စွာတပ်ဆင်သင့်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » MacOS US မှာရှိတဲ့ Mojave » Apple ကနောက်ဆုံးပေါ် macOS 10.14.6 Mojave ဗားရှင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
NA Drobus ဟုသူကပြောသည်
NA Drobus ကိုပြန်ပြောပါ
LG က TV များကို HomeKit နှင့် AirPlay2တို့ကိုလာမည့်သီတင်းပတ်တွင်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်
Apple က ၁၂ လက်မ MacBook ကိုဆက်လက်ရောင်းချသည်